ROI Inowedzera Yemagariro Scoring yeMakambani Ekushandisa Martech Zone
Wedu wekushambadzira otomatiki mutengi uye anotsigira, Right Pane Inopindirana (ROI), zvave zvichishamisa kushanda pamwe. Ivo vanoziva kuti kushambadzira otomatiki musika uri kukura uye ivo vakatsunga kutyaira yavo yega nzira kumberi pane kutarisa zvinoitwa nevamwe vese. Ndicho chimwe chezvikonzero nei yavo yekushandisa interface iri nyore kushandisa, yavo yekumhanyisa nguva inokurumidza kupfuura vakwikwidzi, uye kugona kwesystem yavo kwakasarudzika pakati pevezera ravo.
Ndokusaka Troy Burk iri zvakare kuzivikanwa semutungamiri mukunzwisisa kuti zvibodzwa zvinokanganisa sei hupenyu hwevatengi. Mazhinji ekushambadzira otomatiki masystem anotanga nekufona-kune-chiito uye kupera nekushandurwa. Troy agara achivaka kambani yake kuti ruzivo rwunodiwa kushandura tarisiro chaiyo runowanikwa nekuongorora maitiro evatengi vako. Uye zvakakoshesa sekuwana bhizinesi idzva kuona kuti urikushanda bhizinesi rako riripo. Ivo vanotsanangura izvi se mutengi lifecycle kushambadzira.
Kune zvakawanda zvezvigadzirwa izvo zvinobatsira mushambadzi kutumira mameseji ekutengesa kune kune vezvenhau venyika. Aya maapplication ari kubatsira mutengesi kushevedzera mukati kunzvimbo yemagariro. Ini ndinoda kudaidza zvigadzirwa zvakadaro "ma speaker" "sechinangwa chekutanga pane kungoedza uye kukwidziridza meseji yekutengesa yakapararira kune vanhu vakawanda. Isu takatora imwe nzira needu enhau enhau maficha uye mashandiro. Isu tinobatsira mushambadzi kutarisa pamhinduro kumashure kwesocial media mameseji avari kuita. Amol Dalvi - VP kana Zvigadzirwa neTekinoroji
ROI Yemagariro icharega vashambadziri vatarise zviitiko zvepa twitter, zvibodzwa zvevateveri ve twitter, uye vopindura meseji dze twitter.
Zvakare, chiitiko ichi chinogona kusanganisirwa neanozivikanwa maNongedzo mune yako ROI account. Uku mukana wakakura sekusazivikanwa kwenyaya dzepaTwitter zvino dzava Kutaurirana mune yavo dhatabhesi.
Izvi zvine simba rinotyisa! Iwo maratidziro anochinjika anotendera mushambadzi kuyedza uye kuyera maitiro ehunhu epaTwitter sekutevedzera, kudzorera kana kutumira meseji, zvinokanganisa hukama hwese hwevatengi. Kana iwe ukaona kuti hunhu hwekudyidzana hunhu hwakasimba hwehunhu hwekutenga, unogona kuda kukora izvi zvakakwirira kupfuura zvimwe zviitiko uye gadzirisa yako mameseji uye zvinopihwa zasi kwerwizi. Zvichida iwe unovawana vasina hunyanzvi - kuti iwe ugone kuvakwenya zvishoma uye gadzirisa chibvumirano chinotarisa pahukama uhwu pasina kutyora bhangi.
Tags: 3d zvibodzwamutengi lifecycle kushambadziraHupenyu hwekushambadziramarketing automationkurudyi pane kudyidzanazvemagariro zvibodzwatwitter kurova
Ndira 17, 2013 na1: 33 PM
Makorokoto kuTroy, Amol uye timu yeRI! Chinhu chikuru.